Prof. Jawaari oo ka baaqdey booqashadiisii Norwey. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Prof. Jawaari oo ka baaqdey booqashadiisii Norwey.
Prof. Jawaari oo ka baaqdey booqashadiisii Norwey.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya prof. Mohamed Osman Jawari oo loo balansanaa inuu maanta kasoo dago Norwey si uu uga qaybgalo xuska sanadguurada 10-aad ee xarunta nabada Oslo-senter, ayaa ka baaqday safarkiisii Norwey sababo shaqo awgeed. Khilaaf cusub ayaa soo kala dhexgalay madaxda sare ee dowlada Soomaaliya iyo golaha baarlamaanka. Khilaafkaas oo salka ku hayo heshiis ay horey u wada saxiixeen beesha caalamka, dowlada soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada qaybta ah dowlada federaalka. Waxaana hada socdo kulamo joogto ah oo ay yeelanayaan madaxda dowlada iyo baarlamaanka.
Previous articleCaptan Ciise Midnimo oo markale kasoo dhex muuqday horyaalka labaad ee Norwey.
Next articleMaxkamada sare ee Norwey oo ogolaatay in gabar soomaali ah wadanka laga ceyriyo.